Burmese People: June 2008
မွေးနေ့ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း....
(ဓါတ်ပုံ များကို www.niknayman.blogspot.com မှကူးယူဖော် ပြသည်)
မနက် (9း00) လောက် အိမ်က စထွက် ခဲ့ တယ် ..ဗဟန်းရောက် တော့(93း0 ) ကျော်ကျော် လောက် ရှိ ပြီ..၊ ရုံးချု ပ် ရှေ့မှာ အဖွဲ့ ၀င် တော် တော် များများ ရောက် နေ ကြ ပြီ..။ ကျနော် လဲ တယောက် ထဲ လာ တာ ဆိုတော့အသိ မိတ် ဆွေ တွေ လိုက် ရှာ မိ တယ် …။ အသိ တယောက် နဲ့ တွေ့တော့လပ်ကီး ဆဲဗင်းလက် ဖက် ရည် ဆိုင် ဖက် ထွက် လာ ခဲ့ တယ် …။ အဲဒီ လို လာ ရင်းပါတ် ၀န်းကျင် ကို လေ့လာ လိုက် တော့ရွှေဂုံတိုင် ပွိူင့်နား က ကြက် လျှာ စွန်း ဒံပေါက် ဆိုင် ဘေး ကွပ် လပ် မှာ ချောဆွဲ လာ တဲ့ (105 ) ဒိုင် နာ ကား နှစ် စီး နဲ့ စွမ်းအား ရှင် တချို့တွေ တယ် ..။ ကြားတော ရ လမ်း မှာတွေ ယုဇန ဟို တယ် ရှေ့လမ်းထောင့်မှာ ဒိုင် နာကား ခြောက် စီး ၊ ဟိုင်း လပ် ကား သုံးစီးလောက် တွေ ရ တယ် ..ကား ပါတ် ၀န်းကျင် မှာ စွမ်းအားရှင် တွေ ကြံဖွတ် တွေ နဲ့ အရပ် ၀တ် ရဲ တွေ အင်အား စုစုပေါင်း လေး ရာ လောက် တွေ့ရ တယ် ..၊ ဒါ့အပြင် ရုံးချုပ် မျက် စောင်း ထိုး က ကျောာက် ဆည် ဓမ္မာရုံ နဲ့ အခြားဓမ္မာ ရုံ ၀န်းထဲ မှာ လုံထိန်း ကား လေး စီး မှာ ယူနီဖောင်း အပြည့်နဲ့ ရဲတွေ အင် အား က ငါးဆယ် လောက် ရှိ မယ် အသင့်စောင့်နေ ကြတယ် ။ ပြီးတော့ရုံးချုပ် ရှေ့တည့် တည့်က တဲ ကြီး ထဲ မှာ လည်းကင် မရာတွေ ၊ စကားပြောစက် တွေ ကိုင် ဆောင် ထားကြ တဲ့ အရပ် ၀တ် နဲ့ သူတွေ တဲကြီး ထဲ မှာ အပြည့်ပဲ …။
ဒီလို နဲ့ကျနော် တို့လဲ လက်ဖက် ရည် ဆိုင် ကနေ ရုံးချုပ်ိ ရှိ ၇ာ ကို ပြန် လာ ကြ တယ် …။ ဒီ အချိန် မှာ ရုံးချုပ် ၀န်း ကျင် မှာ အဖွဲ့ ၀င် တွေ တော်တော် ရောက် နေ ကြပြီ ဖြစ် ပါ တယ် ..။ ရုံးထဲ မှာ က အကျွေး အမွေး အစီ စဉ် ပြု လုပ်နေတာ ကြော င့်လူတွေ များနေ တာ နဲ့ ကျနော် တိ်ု့ရုံး နံဘေး မှာ ရှိ တဲ့ ပရိ ဘောဂ ဆိုင် နားတ၀ိုက် မှာ ပဲ စကားပြောနေကြ ပါ တယ် …။ ဒီ လို နဲ့ နေရင်း(11း00 ) လောက် မှာ ရုံးချုပ် ထဲ ကနေ သံဃာတော် တပါး နဲ့ အဖွဲ ၀င် အချို့က ဌက် လှောင် အိမ် များကို ကိုင် ပြီးထွက် လာ ပါ တယ်…။ ကျနော် တို့လဲ ထိုသူ များ ဆီ သို့ သွားလိုက် ပါတယ် ..၊ အဖွဲ့ ၀င် မျာ့း ဌက် များလွှတ်နေ ချိန် မှာ “ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ကျန်း မာပါစေ….” “ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ဆုံးလွတ် မြောက် ပါစေ….” ဆို ပြီး ၀ိုင်းဝန်း ဆုတောင်းပေးနေ ကြ ပါ တယ် …။ အဲဒီ အချိုန် မှာ တဖက် က အာဏာ ပိုင် တွေ ယောက်ယက် ခက် ပြီး ဓါတ်ပုံတွေ တဖျက်ဖျက် ရိုက် …၊ ဖုံးတွေ ဆက် နဲ့ တော် တော် အလုပ် များနေကြပါတယ် …။ ထို အချိန် ထိ မိမိတို့ဖက် မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ နဲ့ ဆုတောငး်း ပွဲ လုပ် နေကြ တုန်း ပါ…။ ဒီအချိန် မှာ အာဏာ ပိုင် တွေ ဖက် က ကင် မရာ သမားတွေ ဟာ လမ်းလယ် စည်း ကိုကျော် လာ ပါ ပြီ..။ အားလုံး ဆယ်ယောက် ဆယ် ငါးယောက် လောက် ရှိမယ် …။ အဲဒီ လို ဌက် များဘေး မဲ့လွှတ် လို့အပြီး မှာတော့လူ ငယ် တဦး က .. “ ဒုက္ခ သည် များအကူအညီ ပေး.. နေရေး က လဲ ခက် …သေရေး က လဲ ခက် ..” စာတန်း ဆိုင်းဘုတ် ကို ကိုင် မြောက် ပြီ ထွက် လာ ပါ တယ် ..။ ဆုတောင် နေကြ သူများ မှာ ထို လူငယ် ဖက် သို့အာ ရုံရောက် သွားချိန် မှာတော့တဖက် မှ ကင် မရာ သမား များဟာ လမ်းလည် စည်း ကို ကျော် ပြီး ရုံးချုပ် ရှေ့သို့ပင် ရောက် လာ ကာ ဓါတ် ပုံတွေ ရိုက် ကြ ပါ တယ် …။ ဒီ အချိန် မှာ ပဲ ကြားတော ရ လမ်းကြား ထဲ မှာ ရပ် ထားတဲ့ ဒိုင် နာ ကားလေး စီး ထွက် လာ ကာရုံးချုပ်ိ အ၀င် အ၀ ရှေ့နှင့့် ဆို လျှင် ဆယ့်ဆယ် ပေလောက် အထိရောက်လာ ပါတယ် ..။ ကားသမားတွေ ဟာ ကားစက် သံ ကို ပြ င်းသထက် ပြင်းအောင် မောင် လာ ပါ တယ် .. ကားပေါ် မှာ လဲ စွမ်းအား၇ှင် နှင့်ကြံ့ဖွ တ် တွေ တစီး လျှင် ဆယ့်ငါးဦး ခန့်ပါလာ ပါ တယ် …။ အရပ် ၀တ် နှင့်သူအတော် များများ က လဲ ထိုကားများနောက် မှ လမ်း လျှောက် လိုက် လာ ပါ တယ်……..။ အချို့ သူများလက် ထဲ မှာ သစ် သား တုတ် များ ၊ သံတုတ် များကို သတင်း စာစက္ကူ နှင့် ပတ် ပြီး ကိုင် ဆောင် လာ တာ ကို လဲ တွေ့ရ ပါ တယ် ။ ထို အချိန် မှာ ပဲ မိမိတို့ ဖက်ိ မှာ ဓါတ် ပုံ မှတ်တမ်း တင် နေ သော ကို ထွန်း မြင့်ကို စတင် ၀င် ရောက် ရိုက် နှက် ဖမ်း ဆီး ပါတော့တယ် …။ ကို ထွန်း မြင့်ကို အတင်း အဓမ္မ ကားပေါ် သို့ ဆွဲ တင် ပါ တယ်.. ကို ထွန်းမြ င့်မှ လက် ထဲ မှ ကိုင် ဆောင် ထား သောကင် မရာ ကို မရ မက ကတ္တရာ လမ်း ပေါ် သို့ပြန် လည် ပစ် ချ ပေး ခဲ့ နိုင် ပါ တယ် ..။ ထို သို့ ရုန်ရင် ဆန်ခက် ဖြစ် နေ ချိန် မှာ မွေးနေ့ပညာရေး ထောက် ပံ့ ပေး ပွဲ သို့ရောက်ရှိလာကြသော အဖွဲ့ ၀င် များ၏ ကျောင်းသား ကလေး ငယ် များလဲ လူ အုပ်တွင် ရောက် ရှိနေချိန် ဖြစ် တာကြောင့်ကလေး ငယ် များအား အာဏာပိုင် များရိုက် နှက် အကြမ်းဖက် မှု မခံ ရ စေရန် ကာကွယ် ပေးနေသော ဦးမောင် သိန်း(မင်္ဂလာဒုံ ) အားဝင် ရောက် ရိုက် နှက် ဖမ်း ဆီး ပြန် ပါ တယ် …။ ဦးမောင် သိန်း အားထိုသို့ဝငိရောက် ဖမ်း ဆီးနေချိန် မှာ အရပ် ၀တ် နှင့်အာဏာ ပိုင် တယောက် က ဌက် ဘေး မဲ့ လွတ် ရာ တွင် ဦးဆောင် ပါ ၀င် သော သံဃာ တော် တပါး အား… “ ဟို မှာ …ဟို မှာ .. ဘုန်းကြီး ..အဲဒ်ီ ဘုန် ကြီး ကို ပါ ဖမ်း…” ကား ပေါ် တွင် ကျန် ရှိနေကြသော စွမ်းအားရှင် နှင့်ကြံ့ ဖွတ် များကို အမိန့်ပေးလိုက် ပြီး ၀င် ရောက် ဖမ်းဆီးစေ ပါ တယ် ….။ ထို သို့အပြီး မှာ အဖွဲ့ ၀င် အားလုံးနီး ပါ ရုံး တွင်းသို့ဝင် ရောက် ကြ ပြီး အ၀င် အ၀ မှာ အဖွဲ့ ၀င် လူငယ်တချို့နှင့်လူကြီး ပိုင်း တချို့က ပိတ် ဆို့ပြီး ထိုင် ချ နေလိုက် ပါ တယ် ..။ အာဏာ ပိုင် တွေ ကြံ့ဖွတ် တွေ စွမ်းအားရှင် တွေ က ထို အချိန် အထိ ပြန် လည် ထွက် ခွာ ခြင်းမရှိသေး ပဲ ရုံး ရှေ့မှာ တင် စကားပြောစက် တရမ်း ရမ်း ၊ ကင် မရာတွေ တရမ်းရမ်း နှင့်ရှိနေကြ ပါ သေး တယ် …။
ထို့သို့တဖက် နှင့်တဖက် အခြေအတင် ဖြစ် နေ ပြီး ခဏ အကြာ မှာတော့ဘဘဦးအောင် ရွှေ ကားနှင့်ရောက် လာ ပါ တယ်…။ ထိုသို့ဘဘရောက်ရှိ လာ ချိန် မှာတော့စောစောက စွမ်အားရှင် များကို တင် ဆောင် ထားသော ကား များအလျှိုအလျှို ဖြင့်မောင်း ထွက် သွားကြပါတယ်…။ ခဏ အကြာ မှာတော့ အာဏာ ပိုင် များဖက် မှ နေ၍ နှစ် ဖက် ညှိ နိုင်းဖို့ကမ်း လှမ်း လာ ပါ တယ် …။ ရုံးချုပ် ဖက် မှ ခွင့်ပြု လိုက် သော အခါ ရပ်မိရပ်ဖ အမည် ခံ အာဏာ ပိုင် တွေ ဖက် မှ လေး ဦး လူကြီး များနှင့်လာရောက် ညှိ နိုင်းကြပါ တယ် …။ ထို သို့ညှိနိုင်း နေမှု့ ကို မိမိတို့ရုံးအောက် ထပ် မှ နေ၍ ထွက် ပေါ်လာမည် အဖြေ အား စောင့်စားနေကြ ပါ တယ် …။ ခဏ အကြာ ထို သူ များရုံးတွင် မှ ပြန် လည် ထွက် ခွာ သွားပါ တယ် ..။ အဖွဲ့ ဝင် များကို လည်း ကျန်ရှိနေသေး သည့်အစီ စဉ် များကို ဆက် လက် ကျင် ပ နိုင် ပြီ ဖြစ် ကြောင်းဦး လှ သိန်း မှ ကြေ ငြာ ပေး ပါ တယ် ….။ ထို သို့အာဏာ ပိုင် များ လာရောက်ညှိ နိုင်းရာ တွင် ရုံးချုပ်ရှေ့သို့ဝင် ရောက် အကြမ်း ဖက် ဖမ်း ဆီး မှု့အား မည့်သို့မျှ သဘော မထားရန်…သာမာန် အဖြစ် အပျက် အဖြစ် သာ သဘော ထား ရန် တောင်း ဆို ပါ တယ် …။ ဒါ ကို အဖွဲ့ ချုပ် တာ ၀န် ရှိသူ များက လက် မခံ ပါ ဘူး….။ အဖွဲ့ ချုပ် ဘက် မှ ပြန် လည် တောင် ဆိုရာ တွင် အခန်းအနားအားဆက် လက် ကျင်းပ ခြင်းကို မနှောက် ယှက် ရန်..၊ အဖွဲ့ ၀င် များ အပြန် လမ်း တွင် ပိတ် ဆို့ဖမ်း ဆီး ဖမ်း ဆီး ခြင်းများ မပြု လုပ် ပါ ဟူသော ခံဝန် ကတိ များကိုတော့အာဏာပိုင် များ ဖက် မှ ပေး သွား ကြ ရ ပါ တယ်….။ ဖမ်းဆီး သွားသူ များ ပြန် လည် လွှတ် ပေး ဖို့တောင်းဆိုတာ ကို တော့အကြောင်း ပြန် ခြင်းမရှိ ပါ…ဟု သိ ရ ပါ တယ်…။
ထိုသို့အာဏာ ပိုင် များ ၀င် ရောက် အကြမ်းဖက် မှု့ကြောင့်…့ ၆၃ နှစ် မြောက် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အခန်း အနားအား တစ် နာရီနီးပါးရပ် ဆိုင်း သွားခဲ့ ရာ က နေ ကျန် ရှိနေ သည့်ပညာရေး ထောက် ပံ့ ပွဲ အခန်းအနား အားပြည် လည်စတင် နိုင် ခဲ့ ပြီး နေ့လည် နှစ် နာ ရီ ခန့် တွင် ပြီး ဆုံးသွား ခဲ့ ပါ တယ် …။
ထပ်မံ သိ ရှိရ သည် မှာ အကြမ်း ဖက် မှု့ဖြစ် ပွားနေချိန် တွင် ရုံးချုပ် မှ ပြန် သွားသော အဖွဲ့ဝင် နှစ် ဦး အား ရွှေ ဂုံတိုင် ကား မှတ်တိုင် အနီး တွင် အာဏာ ပိုင် များ မှာ ပိတ် ဆို့ဖမ်းဆီး သွားကြောင်းထပ် မံ သိရှိရ ပါ သည်..။ထိုသူနှစ်ဦးအား အတည် ပြု နိုင်ရန် စုံစမ်းဆဲ ဖြစ် ပါ သည်…။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 02:400comments
Labels: ကိုယ်တွေ့ ကြုံ....
နာဂစ် ခရီးသည်.... ( အပိုင်း -၅ )
ကျောက်တန်း မြို့အပြန် ကားပေါ်မှာ ကျောက် တန်း မြို့ ကို လှူရန်သင့် မသင့်စဉ်းစား လာပါ တယ် ။ ကျောက်တန်းမြို့ ပေါ် မှ မြို့ခံ ပြည် သူများက လာရောက်ခို လှုံ့ ကြသော ဒုက္ခ သည် များကို ကျွေးမွေးထားနိုင် စွမ်း ရှိသေး သည် ။ ထိုနေရာမျိုး ဖြင့်စာလျှင် မြို့ပေါ် ရော တောနယ် တွေ ပါ ပျက် စီးဆုံး ရှုံး သွားသောနေရာဒေသမျိုးတွေ ကို လှူသင့်သည် ဟုစဉ်းစား ပြီး နောက် တနေ့ အစီစဉ် ကို ကွန်းခြံ ကုန်း ဖက် သို့သာ ထပ် မံ သွားရောက် ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချ လိုက် ပါတယ်..။
ရန်ကုန် ပြန် ရောက် တော့သူငယ် ချင်း များကို ပြန် လည် ပြောပြရာ အား လုံး က လည်း သဘောတူ ကြ သည် ။ ထိုကြောင့်နောက် တနေ့ မနက် မှာ ပဲ ကွန်း ခြံ ကုန်း ဖက် ကို ထွက် လာ ခဲ့ ပါတော့တယ်…။ ဘုရင့် နောင်ဈေး မှာဆန် ၀ယ်တော့ကောလဟာလတွေ က ကြားရ ပြန် ပါသေးတယ် … ကားတွေ ကို လုယက် နေတဲ့ကြောင်းပါ ၊ အဖွဲ့ထဲ မှ တချို့က အနည်းငယ် တော့တွေ ဝေ သွားကြ ပါ တယ် ။ သေချာ မသေချာ စုံ စမ်းတော့ဘယ် သူ က မှ ရေရေ ရာ ရာ မပြောနိုင် ကြ ပါ ဘူး ။ ဒါ နဲ့ပဲ ပါးစပ် သတင်းတွေ ကို အာရုံ မထားပဲ … ခရီဆက် ခဲ့ကြ တယ် ..။ ကွမ်းခြံ ကုန်း အသွားလမ်း မှာ သွားရောက် လှူဒါန်းကြ တဲ့ ကားတချို့ကို မြင် တွေ ကြ ပါ တယ် …။ မိမိတို့လှူ ဒါန်း မည့်နေရာကို အတိ အကျ မသက် မှတ် ရသေး ပါ ဘူး .။ အားလုံးက ကျနော့် အပေါ်ပဲ မူတည် နေတော့သူများထက် ပို ပြီး စဉ်းစားရ တယ် ။ ကွန်းခြံကုန်း မြို့ဝင် ပြီး စနည်းနာ လိုက် တော့လာရောက် လှူဒါန်းသူတွေ ရှိနေ ကြ ပြီ ဆိုတာ သိ ရ ပါ တယ်။
မြို့လည် ရောက် တော့ပါတ်ဝန်းကျင် ၇ွာတွေ ကို ကားလမ်း ပေါက် မပေါက် စုံးစမ်းတဲ့အခါ မှာ လမ်းများပျက်စီး သဖြင့်လမ်း ကြမ်း တာကလွဲ လို့သွားလို့ ရ နိုင် ကြောင်းသိရ ပါတယ် ။ ဒါနဲ့ပဲ ကားကို မြို့ အစွန်ဖက် ဆက် မောင်းစေ ပါတယ် မြို့ စွန်ရောက် တော့စံ ပြရပ်ကွက် ဆိုတာကိုတွေ့ရပါ တယ် .. မြို့နှင့်တဆက် ထဲ ပေ မယ့်ရပ်ကွပ် တခုလုံးနီး ပါ ပျက် စီး သွားတာ ကို တွေ့ရ ပါ တယ် ၊ စုံစမ်းကြည့် တော့လာရောက် လှူဒါန်း ကြသူတွေ မြို့စွန် ဖက် မရောက်ကြကြောင်း ၊ ရပ်ကွက် တွင်းသေဆုံးသွားကြသူများမှာ ဦးရေ ခုနစ်ရာခန့် ရှိကြောင်း ၊ လောလော ဆယ် အနေထားတွင် ရပ်ကွက် ရှိဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင် သာ ယာယီ နေထိုင်ကြရ ကြောင်း ၊ အချို့ သူများမှာလည်း မိမိတို့မြေနေရာများတွင် ပြန်လည် တဲ ထိုး နေကြ ကြောင်း သိရ ပါ တယ် ။ ပါတ်ဝန်းကျင် လေ့လာ ပြန် တော့ လဲ ရပ်ကွက် အ၀င် ကားလမ်းဘေးတွင် မှာ ကျွဲ၊ နွား အသေ ဆယ် ကောင် ၊ ဆယ် ငါးကောင် ခန့် မှာ ပုပ် ပွနေပြီး ရေမြောင်း များတွင် ပေါလော ပေါ် နေပါတယ် ။ ရပ်ကွက် မှာလေ အောက် က ဖြစ်နေ သဖြင့်တရပ်ကွက် လုံး မှာ ပုတ်စော် နံ ဟောင် နေ ပါတယ် ။ ကျနော်ဒီရပ် ကွက် ကို လှူ ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် တယ် ၊ တဆက် တည်းမှာ ပဲ ဝေဖို့ ခြမ်း ဖို့အတွက် စီစဉ် လိုက် တယ် .. မြေနေရာကျယ်ကျယ် ၀န်းဝန်း ဆိုလို့လဲ အဲဒိ ကျွဲ သေ နွားသေ ကောင်းများဘေးက ကားလမ်း ပဲ ရှိတယ် ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာ ဝေခြမ်းဖို့ကြတော့လဲ ဘုန်းကြီးကျောင်း ရှိ ဒုက္ခ သည် များနှင့်ရပ်ကွက် တွင်းမှာ ဒုက္ခ သည် များပေါင်း မိပါ က လူအုပ် ကို မထိမ်းနိုင်မှာစိုးရ တယ် ..။ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွဲ ၊ နွားသေ များ၇ှိ ရာ ကားလမ်း ဘေး မှာ ပဲ ကားရပ် ပြီး ရပ်ကွက် တွင်း မှ လူငယ် အချို့နဲ့ ဝေခြမ်း ဖို့စီ စဉ်လိုက် တယ် ။
ဒုက္ခ သည်တွေ ကို တော့တကူးတက စု နေစရာ မလို ပါ … မိမိတို့ကားကို မြင် က တည်း က နားမှာ အားကိုး တကြီးလာ ရောက် ပြီး ရစ်သီရစ် သီ လုပ်နေကြတာ ကလေး လူကြီး အကုန် ပါ ပဲ ..။ ခါတိုင်းလို ပဲ တန်းစီ ခိုင်း လိုက် တယ် တဦးပြီး တဦး ဝေသွားစေ တယ် …။ မိမိတို့ ဝေ ခြမ်းရာ မှာ အိမ်ထောင် စု စာရင်းပြစရာ မလို လူ၇ှိသမျှ အကုန်ရ စေ ရ မယ် ပေါ့ ။ သက် ကြီး ရွယ် အို က လွဲ လို့အကုန်တန်းစီ ပဲ လာသမျှ လူ ကို ကိုစတီး ရေဖလား နဲ့အပြည့် ခပ် ထည့် ပေးလိုက် တယ် တပြည် ကျော် ကျော် ခန့် ပေါ့။ ကျနော် လဲ ကားပေါ် က နေဆန်ဝေ နေရင်းနဲ့ မိမိနဲ့ ပါ လာ သူတွေ ထဲ က လဲ ကိုယ် ထိလက် ရောက်လှူ ချင်သူတွေ အတွက် နေရာလဲ ပြီးလှူစေ တယ်…။ ကျနော် ကားပေါ် က ဆင်း ပြီး တန်းစီ နေတဲ့လူအုပ် ကိုကြပ်မတ် နေလိုက် တယ် .။ အဲဒီအချိန်မှာ လူအုပ် ထဲ က အမျိုးသမီးတွေ ရဲ့ စကားသံ တချို့ကြား မိတယ် …။ ဘာတဲ့ …….ရပ်ကွပ် ရုံးက နေ ဒုက္ခ သည် တွေ ပေးတာ လေး ၊ ငါး ရက် လောက် ကြာ မှ လူတယောက် ကို ဆန် နို့ဆီ ဘူး တလုံးခွဲနဲ့အိမ်ထောင် စု နှစ် စုပေါင်းမှ ကြက် ဥ တလုံး တဲ့ ….။ ဒီကလေးတွေ လာ လှူတာကြည့်စမ်း တဲ့သူတို့ လို နို့ဆီ ဘူး တလုံး ခွဲ ဝေတာ နို့ ဆီ ဘူးကို ၀ါးဇလုပ် တိုက် ပြီးလှူ တာမဟုတ် ဘူး …။ ကလေးတွေ တော် လိုက်ကြာတာ တဲ့…….။ လူပဲ ဗျာ ဒီလို ကို ယ့် ကို ချီမွမ်းသံ လေး ကြားရ တော့ဘာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေနပ်တာပေါ့ …။ အာဏာ ပိုင် တွေ ကြတော့လှူ သာ လှူတယ် နံ မည် ကောင်း ဘာ လို့မရ လဲ ဆိုတော့ကျနော် အထင် ပြော ရ ရင် စိတ် ရင်းစေတနာ မမှန်လို့ပဲ …။ သူတို့က လှူချင် တာ နဲနဲ ကြားက ဖြတ်စား လတ်စား လုပ် ချင် တာ က များနေတော့ စေတနာ က ရောင် ပြန် ဟတ် ခံရတာ ပါ…. ၊ ။
ဒီလို နဲ့ ပဲ ရပ် ကွက် တွင်းဝေ ခြမ်းရေး က ပြီးရောဆို ပါ တော့.. မပြီးလို့ လဲ အပုပ် နံ တွေ ကြားက လှူနေရတာ ဆိုတော့မခံ နိုင် တော့ ဘူး…. နှစ်နာ ရီလောက် အချိန် ကို ပဲ မနည်းအသက် ရှုနေရ တာ …အပုပ် နံ တထောင်းထောင်း နဲ့ နေနေကြ တဲ့ရပ် ကွက် တွင်းလူတွေ ဆို တော့စဉ် စား သာကြည့်ပေ တော့…။ ပြီးတာ နဲ့ ဘုန်း ကြီးကျောင်းဝန်း တွင်း ကားကို ခက်ခက် ခဲခဲ မောင်း ၀င် လိုက် တယ် ..။ လူသွားလမ်းလေးတွေ ဆိုတော့ကျဉ်းတယ် ကားတစီး စာ မောင်း လို့ ရ ယုံလောက် ပဲ ..ကျောင်းဝန်း ထဲ ရောက် ပြန် တော့လဲ ဒုက္ခသည်တွေ က အပြည့်ပဲ ..ကျောင်းမှာ က ဆရာတော့ က ပဲ အဓိက တင် ကျွေး ထားတာ ဆိုတော့ရပ်ကွက် ထဲ မှာ လို ဝေ မနေ တော့ ဘူး ၊ ဆရာတော်ကို ပဲ ဆန်အိတ် တွေ နဲ့ အခြားစားစရာတွေ လှုလိုက် တယ် ကျနော် တိ်ု့လှုလိုက် တဲ့ ဆန် ပမာဏ က ကျောင်းတွင်း မှာရှိတဲ့ ရဟန်းသံဃာ နဲ့လူတွေပါ ငါးရက် တပါတ် စာလောက်တော့စားလောက် မယ် လို့ ထင် ရ တယ် .။ အ၀တ်အစားအတော် များများကို တော့ ကားခေါင်မိုးပေါ်တက် ပြီး ကြဲလိုက် တယ် ၊ အားလုံး ပြီးသွားတဲ့ အချိန် မှာ တော့ ကျနော် တို့ အကုန်လုံးဆရာတော်ကို ဖူး ကြ ပါ တယ် ..ဒေသ အခြေနေတွေ လဲ မေးမြန်းစုံစမ်းတာ လဲပါတာပေါ့၊
ဆရာတော်မိန်ကြားချက် အရ ယခု စံပြ ကျေးရွာ မှ နေ၍ ဆက် သွားလျှင် သုံးခွ ကျေး ရွာ သို့သွားနိုင် ကြောင်း ၊ ထို ရွာ သည် တိုး မြစ် ကမ်း ဘေးတွင် တည် ရှိသည့်အတွက် လှိုင်းလေ ဒါဏ် ကို ပို မို ခံစားရ ကြောင်း ၊ လူအသေအပျောက် များလဲ များပြားကြောင်းမိန်ကြားလာ ပါ သည် ။ ထို သို ကြားလာရတော့မိမိတို့ အဖွဲ့ သား အချင်းချင်း မျက်စ ပစ် ကာတယောက် နှင့်တယောက် နောက် တခေါက်အတွက် ဘယ် လို သဘောရ ကြ လဲ ဟု အဓိ ပ္ပါယ် ပါသောအကြည့် တွေ နှင့်ပေါ့ ….။
ခဏ အကြာမှပဲ မိမိနှင့်နောက် တယောက် မှ ဆရာတော့ ကို ကတိပေး လိုက်ပြန် ပါ တယ်… တပည့်တော် တို ဒီရက် ပိုင်း အတွင်း သုံးခွ ရွာ ကို သွားရောက်လှူဒါန်းနိုင် အောင်ကြိုးစား ပါ့ မယ် ဘုရား…..။ ထို သ့ို ကတိ ပေးအပြီးမှာ ပဲဆရာတော်ကို ဦး ချ ပြီး အပြန် မိုးအရမ်းချုပ် နေမှာစိုးသဖြင့်ပြန်ခဲ့ကြ ပါတယ် …။ အပြန်ခရီး မှာ ကွမ်းခြံကုန်း မြို့က ထွက်တော့ ည (၇း၃၀) ရှိပေ ပြီ..။ တနေကုန်ပင် ပန်း နေပြီ့း ကားပေါ်တွင် ပစ္စည်းများလဲ မရှိတော့ သဖြင့်နေရာချောင် သွားသောကြောင့်မိမိတို့ အဖွဲ့ သားတော် တော်များများမှာ တယောက် နှင့်တယောက် စကား မပြောနိုင် ကြတော့ ပဲ ငိုက် မြည်း လာကြရာ ရန်ကုန်သားသည် လဲ ည(၁၀း၃၀) ရန်ကုန်ပြန် ရောက်လို့အိမ်ရှေ့ကားရောက် မှ အိပ်ပျော်သွားရာ မှနိုးလာ ပါတော့သည်…။
( အပိုင်း ( ၆) အားဆက် လက် ဖတ်ရှု့ပါ ရန်…)
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 01:300comments
ပြည် တွင်း ဘလော့ဂါ များအား သတိပေး ခြင်း..........
ပြည် တွင်း ဘလော့ဂါ များအနေ နှင့်ယခုရက် ပိုင်း အတွင်းအထူးသတိ ထားကြရန် သတိ ပေးလို ပါ သည် ..။ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်းခံ နေရ သော ပြည် တွင်းဘလော့ဂါ တဦး ဖြစ် သည့်ကိုနေဘုန်းလတ် ကို ယခုရက် ပိုင်း အတွင်းပြန် လည် စစ် ဆေး ခဲ့ကြောင်း စစ် ဆေးရာ တွင် ပြည် တွင်း ဘလော့ဂါ များနှင့်အဓိ က ထား၍ မေး မြန်း ခဲ့ ပါ သည်...။ထို့ကြောင့်နအ ဖ အနေ နှ င့်ပြည် တွင်း မှနေ ၍ အင် တာနက် စာမျက် နှာ များပေါ်တွင် နအဖအား ထိုးစစ် ဆင် နေ သော ဘလော့ဂါ များကို
ခြေ ရာ ခံ၍ ဖမ်းဆီး မှု့များအရှိန် အဟုန် မြင့်၍လုပ် ဆောင် လာ နိုင် ပါသည် ။ ထို ကြောင့်ပြည် တွင်းဘလော့ ဂါ များအနေ နှင့်သိုသိုသိပ်သိပ် နှင့်လုပ်ဆောင် သွားကြရန် အထူးတိုက် တွန်း သတိပေးလိုက် ပါသည် ။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 23:540comments
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 23:430comments
မိတ်ဆွေများအား ပန် ကြားခြင်း........
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:590comments
ဒေးဒရဲ မှ အပြန်...........
ဒါပေမယ် နအဖတွေကတော့ ဆန္ဒခံယူပွဲကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားသေးတယ်။
ကျောင်းသားလေးတွေ (၄၀) လောက်သေတယ်။
ကျောင်းမှာ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေ မရောက်သေးဘူးတဲ့။
နိုင်ငံတော် အစိုးရကြီးတွေ သွားရောက်ကြည့်ကြပါအုံး
ဒါကတော့ ဒေးဒရေးကားလမ်းမတလျှောက်မှ ပြန်လည်ကယ်ဆယ်ရေးတဲ့ဗျ
သတင်းစာထဲကလိုဘာတဲ့ မြေအုပ်တို့ နေရာမှာ ကျောက်အုပ်တို့ဖြင့် အစားထိုးမယ် (ဟုတ်လား)
အခုကတော့ ပလပ်စတစ်ကိုတောင် အနိုင်နိုင်သုံးနေရတယ်။
ညီငယ် တယောက် ရဲ့အမြင် နဲ့သူ့သဘောထား ပါ..........
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 08:570comments
Labels: ပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ ချက် များ
ပြန် လည် လွတ် မြောက် ခြင်း
နှစ် ပါတ်လည် နေ့တွင် ဒေါ် အောင် ဆန်းစုကြည် နေ အိမ် ရှေ့သို့ ချီိတက် ခဲ့ ကြ သဖြင့်အဖမ်း ခံ ခဲ့ရ သော လူငယ် 15 ဦးအား မနေ့ည (၁၀:၀၀ ) လောက် က ပြန် လွှတ် ပေး ခဲ့ ကြောင်း သိရ ပါ သည် ။ ထို လူ ငယ် များအား အင်းစိန် ဂျီတီအိုင် ၀န်း အတွင်း မှ ပြန် လည် လွှတ် ပေး ခဲ့ ခြင်းဖြစ် ပါသည်။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 22:310comments
နာဂစ် ခရီးသည် (စတ္တုထ ပိုင်း )
ပထမ ဆုံး အကြိမ် ဒုက္ခ သည် တွေ ကို ကိုယ်ထိ လက် ရောက် လှူ ခဲ့ ကြတဲ့ အတွက် အပြန် ခရီးမှာ အားလုံးကိုယ်စီ ပီတိတွေ အပြည့်နှင့်ပါ ။ ရန်ကုန်သားလဲ မိမိ နဲ့ လိုက် ပါ လာသူတွေ အား နောက် ထပ် ခရီးစဉ် တွေ အတွက် ဆက် လက် စီစဉ် မည် အကြောင်း ပြောဆိုလာသောအခါ အားလုံးက လဲ ဆက်လက် ၍ လုပ်ဆောင် သွားမည့် ဟု ပြောလာကြသည် ။ သို့နှင့်ရန်ကုန်အပြန် ကားပေါ် မှာတင် အမာခံ ၆ ဦး နှင့်အဖွဲ့တခု ဖွဲ့ နိုင် ခဲ့ သည်..။ ရန်ကုန်သို့ပြန် ရောက် ချိန် မှာတော့ည ( ၁၀း၃၀ ) ခန့်ရှိပါ ပြီ ။အားလုံး နှုတ်ဆက် ပြီး မိမိ တို့အိမ်အသီးသီးသို့ပြန်ခဲ့ ကြ သည် .။
နောက် တနေ့မနက် မှာတော့ခရီးစဉ် မှာ ပါဝင် ခဲ့သူ သူငယ်ချင်း တဦး အိမ်သို့မင်္ဂလာ သတင်းတခု နှင့်အတူ ရောက်ချ လာသည်..။ ထိုသူငယ်ချင်း ၏ အိမ်နီးချင်း တဦးမှ နောက် ထပ် အလှူခရီးစဉ် အတွက် မတည် အလှူ ငွေ ဆယ်သိန်း ခန့်ထဲ့ ၀င် မည့်အကြောင်း ပြောလာ ၏ ။ ၀မ်းသာလိုက် သည့်ဖြစ်ခြင်း…ဤငွေ ပမာဏ သည် အတော်အတန် တော့ထိရောက်လိမ့် မည် ဟု မျှော်လင့်မိ သည် ။ သို့နှင့်အဖွဲ့တွင် ပါ ၀င်သူများ အား လိုက်လံ အကြောင်း ကြားလိုက် တော့အားလုံး က ၀မ်းသာကြသည် ..။ အလှူငွေများလည်း ရနိုင်သလောက် ထပ် မံ ကောက် ခံထားကြရန် ပြောထားလိုက် သည် ။ ခရီးထွက် မည့် နေ့ ကိုတော့(၈ ) ရက် နေ့သက် မှတ် လိုက် သည် ။ ကားဌား ဖို့အတွက် ပါ စီစဉ်လိုက် သည်..။ အချိန် ရ သည့်အတွက် ပထမ အခေါက် က ကဲ့ သို့ ကသီလင်တ မဖြစ် တော့….။ ကျန်သည် အဖွဲ့ ဝင် များ မှာ လဲ အချို့ကိစ္စ များတွင် အားကိုးရ သည့်အနေအထားရောက်လာ သည် ။ ထိုနေ့အိပ်ယာ ၀င် ချိန် မှာတော့ပြည်ပ သတင်းဌာန များမှ ထုပ်လွှင့် ချက် များကို နားစွင့်မိသည့်အခါ မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက် စီး မှု့ပမာဏ မှာ လွန်စွားကြီးမား ကြောင်းသိရ သည့် အခါ မှာတော့စိတ်မကောင်းခြင်း များစွာ နှင့်အတူ အခြားမြို့နယ် များ ကို သွားရောက် ကူညီနိုင် ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက် သည်…။ နောက် တနေ့ မနက် စောစော တွင် ရန်ကုန်နှင့်နီးစပ် ပြီးသွားလာရ လွယ်ကူသော တညင်ကျောက်တန်း ဘက် သို့ထွက် ခဲ့ သည်..။ ကျောက်တန်းမြို့နယ်အ၀င် မှာလဲ ယခင် ရောက် ခဲ့ သည့်အခါ များနှင့်မတူတော့အဆောက် အုံတော်တော်များများပျက် စီးကုန် သည် အားကစား ခန်းမ ကြီးသည် မြေတွင် ပြားပြား ၀ပ် သွားသည်..။ ကျောက် တန်းမြို့နယ် ကျေးရွာတော်တော်များများပျက် စီး ပြီး လူအသေ အပျောက် များရှိ်သည် ဟု လဲ ကြားသိ ခဲ့ ရ သည် …။
ဒီလိုနှင့်ကျောက် တန်း မြို့ထဲ သို့လှည့်လည် ကြည့်ရှု့ခဲ့ ရာ တွင် ဒုက္ခသည် စခန်း များ ရွှေ မှော် ၀န်း ၊ သာသနာ့ ဗိမ္မာန် ၊ အထက် တန်းကျောင်း စသည့် နေရာ များတွင် တွေ့ခဲ့ ရ သည် ။ မြို လယ်ရှိ သာသနာ့ဗိမ္မာန် တွင်း ဒုက္ခ သည် များနေထိုင် ကြပုံ ကို ၀င်ရောက် ကြည့်ရှု့ခဲ့ အခါ လွန်စွာစိတ် ပျက် မိ သည် ။ ဒုက္ခသည် များ မှာတွေ့ ရာ နေရာ များတွင် လဲ လျှောင်း နေကြရ ပြီး တမံ သလင်းပေါ်တွင် အခင်းမရှိပဲ နေကြရ သည် ။ ထိုသူတို့၏ အ၀တ်အစား များ မှာ နှုန်း ရေ ၊ ရွံ့ရေ လှိုင်းတံပိုးများ ကြားမှာ အသက် လု ခဲ့ ရ စဉ် ထဲ က ၀တ်ဆင် ခဲ့ ကြသည့်အတွက် မာဂေါက်ဂက် ကြီး များဖြစ် ကာ အောက်သိုးသိုးအနံ များထွက် နေသည် ။ ယောင်္ကျား သားများမှာ များသောအား ဖြင့်အကျီ င်္ မရှိကြ .. အသက် အရွယ်ကြီးရင့်သော အဖိုးအဖွား များ မှာ လဲ အသက် ဘေးမှလွတ်ခဲ့ သော် လည်း အငတ်ဘေးကို ဆက် လက် ခံစားနေရ သည့်အတွက် အချိန်တိုင်းနီး ပါး ကယ် ဆယ် မည့်သူ များကို ငံလင့် နေသည် မှာ သိ သာ လှပါ သည်။ ကျနော်သည် မနေသာတော့ပါ အိပ်ထဲတွင် ပါ လာသော ပိုက်ဆံကို စစ်ကြည့် လိုက် သည်…။ စုစု ပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ခန့်ရှိ ရာာ ဘိုးဘွားများအား…တဦးလျှင် တစ်ထောင် ကျပ် နှုံး ဖြင့်တဦးခြင်းလိုက် လံ လှုဒါန်း ခဲ့ ပါ သည်..။ ဤ သို့လှူဒါန်းရင်းဖြင့်လဲ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါ နိုင်သော မိမိ၏ အနေအထားကို လဲ အားမလို အားမရ ဖြစ်မိသည် ။ ကျောက်တန်းမြို့ သို့ မိမိ မရောက်ခင် အချိန် ကလေး က မှ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ တယောက် ရဟတ်ယဉ် ဖြင့် သက် စွန့်ဆံ ဖျား လာရောက် ပြီး ( 20 – liter ) ၀င် ရေသန့်ဘူး ၆ ဘူးလာရောက် လှူဒါန်း သွားသည့်အတွက် မိမိ အနေ ဖြင့် စာလျှင်………။
သို့ လော သို့ လော အတွေးများဖြင့်ကျောက် တန်းမြို့မှ ပြန် လည် ထွက် ခွာ လာ ခဲ့ ပါတော့သည်……။ (အပိုင်း -၅ အားဆက်လက်ဖတ်ရှု့ ပါ ရန်…)
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:350comments
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 06:273comments
ပင် လယ် ကို အန် တု မည့် ဒုက္ခ သည် အဘိုးအို တဦး....
မုန်တိုင်း တိုက် ခတ် ပြီးသည် မှာ တစ်လ ကြာ ခဲ့ပါ ပြီ..။ ဝေလံ ပြီး ..ရေလမ်း ခရီး ဖြင့်သာ ..သွားရောက် နိုင် သော.. ပင် လယ် ကမ်း ခြေ ရှိ ..တံ ငါ ရွာ များ..တွင် ..အကူ အညီ များ…အရေး တကြီးလို အပ် …လျှက်ရှိနေ ပါ သည်..။ ကယ် ဆယ် ရေး ပစ္စ ည်း များ ယ နေ့ အချိန် ထိ ရောက် ရှိ မလာသေး .. ပါ ။ ပြည် သူ အလှူ ရှင် များ က လဲ ယခု လိုဝေးလံ ပြီး …ရေ လမ်း ခရီး သာ ပေါက် သော ဒေ သ များသို့လာ ရောက် လှူ ဒါန်း နိုင် ခြင်းမရှိ ပါ…။ အချို့အရဲ စွန် ၍ သွား ရောက် လှူ ဒါန်း သူ အနည်း ငယ် သာ လာ ရောက် ကြ သည် ဟု ဆို ပါ သည်…။
ပုံ တွင် ပါ ရှိသည့်အဘိုး အို တဦး ၏ ပုံ မှာ ရေ ထဲ မှ မြော ပါ လာ သော …ပိုက် ကွန် ကို ပြန် လည် ဆက် စပ် ပြီး ဖာ ထေး နေ သည့်ပုံ ဖြစ် ပါ သည် ….။ ထို အဘိုး အို ၏ သား ဖြစ် သူ မှာ ပင် လယ် ထဲ သို့သွားရောက် ငါး ဖမ်း ရင်း ..မုန် တိုင်း ကြား တွင် အသက် ဆုံး ရှုံးခ့ဲ သည့်အတွက် အဘိုး အို ၏ ဘ၀ ရပ် တည် နိုင် ရေး အတွက် ထို အဘိုး အို ကိုယ် တိုင် ပင် လယ် သို့ထွက် ပြီး ငါး ဖမ်းရန် ပြင် ဆင် နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်…။
ယခု ကာ လ သည် ပင် လယ် ပြင် တွင် မိုးသက် မုန် တိုင်း များ မကြာခဏ ကျရောက် နေ သည့်အတွက် ထို အဘိုးအို သည် လဲ အချိန်မရွေး အသက် ဆုံး ရှုံး နိုင် ပါ သည် …။
ထို့ကြောင့်အစိုး ရ ၏ မျက် ကွယ် ပြု ခြင်း ခံ ထားရ သော ..ပင် လယ် ကမ်း ခြေ တံ ငါ ရွာ များသို့ပြည် သူ့အလှူ ရှင် များ မှ အရောက် သွား ပြီး ကယ် ဆယ် ကြ ပါ ရန် တိုက် တွန်းလိုက် ရ ပါ သည် …။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 05:390comments
ပြည် တွင်း ဘလော့ဂါ များအား သတိပေး ခြင်း...........
နာဂစ်ကြောင့် ..ခံစားနေရ သူတွေ နဲ့ ..စံစား နေရ သူတေ...
ပင် လယ် ကို အန် တု မည့် ဒုက္ခ သည် အဘိုးအို တဦး......